mars 2013 – filazantsaramada
« Lazao amin’i Ziona zanakavavy: indro ny Mpanjakanao avy ho anao, malemy fanahy sady mitaingina boriky, dia zanaky ny boriky miasa » Matio 21:5 Raha mijery ara-jeograpfia kely isika, ny Ziona ao amin’ny Testamenta Taloha dia tendrombohitra iray izay niorenan’i Jerosalema. Nisy fotoana nakan’i Davida izany tanàna izany, ary nametrahany ny Fiaran’ny faneken’i Jehovah ka noheverina ho toy […]
Publié parfilazantsaramada mars 23, 2013 mai 31, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Ilay Mpanjaka malemy fanahy sady mitaingina boriky
« Fa tsy hisy ho tanteraka ny teny rehetra ataon’Andriamanitra. » Lioka 1:37 Nirahin’Andriamanitra ny anjely Gabriela hiteny amin’i Maria fa hitoe-jaza izy, ka hiteraka zaza-lahy ary ny anarany hatao hoe Jesosy, Zanaky ny Avo indrindra, ny fanjakany tsy hanam-pahataperana. Ny ambaran’ny anjely tamin’ity virjiny ity dia ny hoe: efa nahita fitia tamin’Andriamanitra izy. Ny mety ho […]
Publié parfilazantsaramada mars 15, 2013 mai 31, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Ny Tenin’Andriamanitra sy ny Fankatoavana Azy
« Misy zazalahy aty manana mofo vary hordea dimy sy hazan-drano madinika roa, fa ho ampy inona moa izany amin’izao olona betsaka izao! Fa hoy Jesosy: Asaovy mipetraka ny olona. Ary nisy ahitra be teo. Ka dia nipetraka ny lehilahy, tokony ho dimy arivo ny isany. Dia nandray ny mofo Jesosy; ary rehefa nisaotra, dia nizara izany tamin’izay nipetraka hihinana […]
Publié parfilazantsaramada mars 8, 2013 mai 31, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Ny namahanan’ny Tompo olona dimy arivo
« Ary Jesosy namoaka demonia moana. Ary rehefa nivoaka ny demonia, dia niteny ilay moana; ka dia gaga ny vahoaka. Fa hoy ny sasany: Belzeboba, lohan’ny Demonia, no amoahany ny demonia. Fa ny sasany kosa naka fanahy Azy ka nangataka famantarana taminy avy any an-danitra. Fa Izy nahalala ny heviny, dia nanao taminy hoe: Ho foana ny fanjakana miady an-trano; ary […]
Publié parfilazantsaramada mars 2, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Amin’ny anaran’i Jesosy